Iindaba -Emva kokuhlala ixesha elide kumzi mveliso we-silicone, abathengi abaninzi baya kuwuva lo mbuzo: iimveliso ze-silicone ezinobungakanani obufanayo okanye ulwakhiwo olufanayo lunexabiso elahlukileyo.
Emva kokuhlala kumzi mveliso we-silicone ixesha elide, abathengi abaninzi baya kuwuva lo mbuzo: iimveliso ze-silicone ezinobungakanani obufanayo okanye ulwakhiwo olufanayo lunexabiso elahlukileyo.
Emva kokuhlala kumzi mveliso we-silicone ixesha elide, abathengi abaninzi baya kuwuva lo mbuzo: iimveliso ze-silicone ezinobungakanani obufanayo okanye ulwakhiwo olufanayo lunexabiso elahlukileyo. Kule sihloko, bekukho
Ndikhathazekile umzuzwana. Ukusombulula le ngxaki, ukongeza ekufundeni kwabo bangaphambili kwishishini, ndathenga iimveliso zesilicone zamaxabiso ahlukeneyo, abavelisi, kunye nemimandla yokuthelekisa.
Namhlanje, ndiza kukunika inkcazo elula yenkampani yethu’Iimveliso, ngethemba lokukunceda uqonde ngakumbi imveliso ye-silicone.
1. Malunga nezinto: Amanye amashishini akhethekileyo aneemfuno ezithile zeemveliso zesilicone. Umzekelo, ixabiso leemveliso zesilicone ezenziwe ngeglue yemozulu kunye neemveliso eziqhelekileyo zesilic zihluke ngokuqinisekileyo.
2. Ubungakanani bolwakhiwo: Enye ijeli yesilika ibonakala ifana ngaphandle, kodwa ubukhulu bayo bobume bayo bunokwahluka, kwaye ulwakhiwo lukwanobunzima ngakumbi, oluya kuchaphazela imveliso, ngenxa yoko ixabiso alikho ngokufanayo.
3. Inkqubo: Ukwahluka kwenkqubo yemveliso ye-silicone iya kuchaphazela nendleko zemveliso. Njengokushicilelwa kwesilika, ukuprintwa kwencwadi, ukuhanjiswa kwe-thermal, njl
4.Umngundo: Inani lemingxunya ekubunjweni kwemveliso liya kuchaphazela amandla emveliso. Kuphela xa ibango lomthengi kunye nenani lemingxunya ekubumbeni ifikelela kumlinganiso ofanelekileyo, apho iindleko zabasebenzi zinokuncitshiswa kunye nokusebenza kweendleko zeemveliso ze-silicone ezinokuthi ziphuculwe.
5. Ibango: Kwimveliso enye, eli likhulu inani lokwenza ngokwezifiso, kokukhona ixabiso liya kuba lihle.
Ukusuka apha ngasentla, kunokubonwa ukuba ixabiso leemveliso zesilicone ezibukeka ngendlela efanayo azizukufana. Inxulumene nezinto ezisetyenzisiweyo ezingasetyenziswanga, ubungakanani besakhiwo, itekhnoloji yemveliso, inombolo yomngundo kunye nobungakanani beodolo.
Ke ngoko kuyacetyiswa ukuba abathengi babeke imixholo ngaphambi kokulungiselela imveliso, emva koko basebenzisane nomenzi wayo. I-Zhongsheng Silicone yamkela bonke abathengi ukuba beze ngokwezifiso, okoko ufuna, sihlala silapho.
Ixesha lokuposa: Mar-25-2021